दाग लागेको सिसा बनाउन वा मोशाको सिर्जना गर्न, आफ्नो रेखाचित्र मा राख्न: साधारण ग्लास कला काम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर सबैभन्दा रमाइलो तरिका - यो अपारदर्शी बनाउन छ।
ग्लास को परिवर्तन
धेरै भित्री वस्तुहरू मा अपारदर्शी ढोका प्रयोग गरेर। Frosted ग्लास तपाईं भान्सा मंत्रिमंडलों सामग्रीहरू रुप बदल्नु, वा एक मूल शवर जारी गर्न अनुमति दिन्छ। राम्रो र ठीक विवरण हेर्न हुनेछ।
उदाहरणका लागि, frosted ग्लास stemware वा पारदर्शी मैनबत्ती को भित्री रहस्य को एक स्पर्श एक स्टाइलिश दिनेछु। तपाईं उनको हातमा frosted ग्लास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्।
जमीन नीरस ग्लास रूपमा
तपाईं बस उल्टो पक्षमा विशेष फिलिम छडी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो विधि र साना समय लाग्छ हुनत, तर गुणस्तर चाहेको गर्न धेरै छोड्छ। जब frosted ग्लास स्यान्डब्लास्टिङ वा सम्बन्धित उद्योग मा रासायनिक हालतमा गरेको छ उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। घर मा र यो शायद राख्नु गर्न सक्नुहुन्न।
सबैभन्दा सुविधाजनक र पर्याप्त गुणवत्ता frosted ग्लास विशेष पेस्ट वा स्प्रे प्रयोग गरेर प्राप्त। सामग्री बैंकहरू राम्रो, मिश्रण न्यानो पानी बन्द धुन निर्धारित समय पछि, उत्पादन मा3मिमी को एक पत्र लागू गर्न आवश्यक छ। स्प्रे संग पनि सजिलो छ। कि सामग्रीहरू त्यसैले छाला, वस्त्र, फर्नीचर मा प्राप्त भएन र निश्चित बनाउन सक्छन् शेक र आवश्यक वस्तु स्प्रे। डी
तपाईंले केही गहने संग frosted एक गिलास कसरी बनाउने थाहा छैन? अब हामी सबै बताउन छौँ। पहिले तपाईं यसलाई विभिन्न मार्गदर्शकरेखाथप्नुहोस् रहन आवश्यक छ। ठूलो आकार मा कागज टेप प्रयोग। त्यसपछि, उपलब्धता पेस्ट वा स्प्रे मा भाग लागू र एक निश्चित समयको लागि बाँकी। एक घर्षण समावेश छ भने, यो (तपाईं विच्छेद गर्न) एक घण्टा अन्य मा ग्लास को एक टुक्रा RUB गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि ग्लास धोए छ र ब्रश ढाँचा रहन्छ, को पूर्वानिर्धारितएकाईहरू हटाइएको छ।
एक कैंडलस्टिक लागि पारदर्शी ढाँचा
यस मामला मा, एउटै सिद्धान्त, केवल उल्टो मा। यसलाई स्पष्ट छोडेको हुनुपर्छ, र सबै अरू Matira भाग द्वारा छाप। उदाहरणका लागि, मैनबत्ती होल्डर।
बाक्लो चिल्लो ग्लास एक गिलास मा खुला गम घाउ गर्न सकिन्छ।
काम सतह ध्यान कागज वा कपडा राख्नु।
कागज कस अप रोल्ड र तयार गिलास मा जोर - त्यसैले यो पकड र बारी गर्न सम्भव हुनेछ।
त्यसपछि aerosol सम्पूर्ण सतह स्प्रे र निर्दिष्ट अवधि धान्न।
त्यसपछि गम, धोए र सुकेको ग्लास हटाउन। मैनबत्ती भित्र राख्नुहोस् - मूल डिजाइन तत्व तयार छ।
त्यसै गरी, तपाईं एक सादा रक्सी चश्मा, रक्सी चश्मा, गोली चश्मा, vases र अरूलाई सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
चटाई लागि पेस्ट कसरी बनाउने
यो distilled पानी, gelatin र सोडियम fluoride देखि तयार छ। 1: 2, क्रमशः र मिश्रित तिनीहरूले 25 एक अनुपात लिइएका छन्। परिणामस्वरूप निरूपण ग्लास लागू गरिएको छ। त्यसपछि, राम्ररी rinsed, सुकेको र एक मिनेट लागि छ प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक एसिड लागू।
कसरी frosted ग्लास हेरचाह गर्न
यस्तो तेल दाग रूपमा गम्भीर प्रदूषण देखि, बजार मा उपलब्ध विशेष उपकरण हटाउन मदत गर्न। फ्लोरिन समावेश रचनाहरूको, प्रयोग गर्न सकिँदैन।
को matted सतह थप स्पष्ट भन्दा चिल्लो, देख्न सकिने औंठाछापहरू मा। तिनीहरूले हालै देखा छ भने, यो तिनीहरूलाई सुक्खा वा हल्कासित झन्डा microfibre कपडा हटाउन पर्याप्त छ। Frosted ग्लास कहिलेकाहीं एक साबर संग साफ र न्यानो कमजोर सिरका समाधान संग धुन सकिन्छ।
हठी दाग हटाउन सकिँदैन दाँत पाउडर संग वा धुलो चक। एक भिजेको सतह मा एक नम स्पन्जले संग एउटा सानो रकम खन्याउन र ध्यान माटो हटाउन आवश्यक छ। पानी कुल्ला। तपाईंले लामो-खडा स्थलहरू हटाउन अमोनिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Frosted ग्लास कुनै पनि भित्री सजाउनु, र उचित हेरविचार लामो समय को लागि आफ्नो सुन्दरता कायम हुनेछ।
टाँसन संग सरल सर्किट crochet कोण
सूत्रका इस्टर अन्डा: तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी बनाउने
Biseptol: प्रयोगको लागि निर्देशन
के साँच्चै इस्टर आइल्याण्ड मा सभ्यता भयो?
रूस मा poorest शहर के हो? शीर्ष रूसी poorest शहर
आधुनिक रूसी किशोरी को जीवन शैली